घरमै बसेर कोरोना परीक्षण कसरी गर्ने? (भिडिओ) :: सुसन चौधरी :: Setopati
घरमै बसेर कोरोना परीक्षण कसरी गर्ने? (भिडिओ)
तपाईंलाई कोरोना शंका लागेको छ? ल्याब वा अस्पताल पुगेर पिसिआर गर्न मिलिरहेको छैन?
त्यसो हो भने चिन्ता नलिनुहोस्।
तपाईंले घरमै बसेर आफैं कोरोना परीक्षण गर्न सक्नुहुनेछ।
यसनिम्ति कोभिड परीक्षण किट चाहिन्छ। नजिकैको फार्मेसीहरूमा नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त कोभिड परीक्षण किट पाइन्छ।
क्रिस्टल डाइग्नोष्टिक प्रा.लि. का माइक्रोबायोलोजिष्ट विष्णु ज्ञवालीले हामीलाई यसको प्रयोग विधि बुझाएका छन्।
उनका अनुसार सबभन्दा पहिले त परीक्षण गर्नुअघि मजाले हात धुनुपर्छ। वा स्यानिटाइजरले सफा गर्नुपर्छ। परीक्षण किट प्रयोग गर्ने निर्देशन किटभित्र हुन्छ। प्रयोग गर्नुअघि त्यस २-३ पटक राम्ररी वा बुझ्नेगरी पढ्नुहोला।
कोभिड परीक्षण किटभित्र तपाईंले स्वाब स्टिक, एक्स्ट्राक्सन बफर ट्युब, ट्युब राख्ने बाकस र टेस्ट किट पाउनुहुन्छ।
घरमै बसेर एन्टिजेन किट प्रयोग गर्न प्रक्रिया सिकाउँदै माइक्रोबायोलोजिष्ट ज्ञवाली भन्छन्, ‘पहिला एक्स्ट्राक्सन बफर ट्युबलाई ट्युब राख्ने बाकसमा राख्नुस्। अब स्वाब स्टिकलाई प्याकेजिङको छेउबाट सावधानीपूर्वक निकाल्नुस्।’
स्वाब स्टिकको सोस्ने टुप्पोलाई आफ्नो हातले छुन हुँदैन। आफैंलाई स्वाब स्टिक प्रयोग गर्न असहज भए अरुको सहायता लिन सकिन्छ।
‘अब ऐनामा हेरेर वा अरुको मद्दतले स्वाब स्टिकको सोस्ने टुप्पोलाई नाकको एउटा प्वालमा घुसाउनुहोस्,’ माइक्रोबायोलोजिष्ट ज्ञवालीले भने, ‘दुईदेखि तीन सेन्टिमिटर नाकभित्र राखेर छेस्कोलाई ५ पटक घुमाउहोस्। धेरै बाहिर राखेमा नतिजा ननिस्किन सक्छ। त्यसैगरी धेरै भित्र राखेमा आफैंलाई असहज भएको अनुभव हुन्छ।’
सो प्रक्रिया अर्को नाकको प्वालभित्र पनि दोहोर्‍याउनपर्ने ज्ञवाली बताउँछन्।
त्यसपछि स्वाब लिएको स्टिक निकालेर एक्स्ट्राक्सन बफर ट्युबमा राख्नुपर्छ। ट्युबको छेउको भाग दबाउँदै पाँच पटक घुमाएर केही मिनेट राख्न उनले सुझाए।
अब ट्युबलाई दबाउँदै स्वाब बाहिर निकाल्नुहोस्। ड्रपरको टुप्पोलाई विस्तारै एक्स्ट्राक्सन बफर ट्युबमा जोड्नुहोस्। बाँकी प्रक्रिया सिकाउँदै ज्ञवालीले भने, ‘अब टेस्ट किटमा एक्स्ट्राक्सन बफर ट्युबको मिश्रणको ४ थोपा नमूना हाल्नुहोस् र नतिजा पर्खनुहोस्।’
एन्टिजेन किटमा लेखिएको निर्देशन अनुसार १५ देखि ३० मिनेटभित्र नजिता देखिन्छ। टेस्ट किटमा ‘सी’ र ‘टी’ गरेर दुईवटा अक्षर अंकित गरेको पाइन्छ। यदि नियन्त्रण रेखा ‘सी’मा मात्र रातो धर्का देखिएमा नतिजा नेगेटिभ छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। दुवै नियन्त्रण रेखा ‘सी’ र परीक्षण रेखा ‘टी’मा रातो धर्को आएमा नतिजा पोजेटिभ भएको बुझ्न सकिन्छ।
‘पोजेटिभ नतिजा देखिएका आफूलाई आइसोलेसनमा उचित हुन्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘सास फेर्न गाह्रो भएमा वा अन्य समस्या देखा परेमा नजिकैको स्वास्थ्य चौकी जानुपर्छ वा डाक्टकसित सल्लाह लिनुपर्छ।’
यदि परीक्षण रेखा ‘टी' मा मात्र धर्को आएमा वा कुनै पनि धर्को नदेखिएको खण्डमा परीक्षा गलत तरिकाले गरिएको बुझ्न सकिन्छ। यस्तो खण्डमा पुनः जाँच गर्नुपर्ने वा नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा परीक्षण गर्न जान उनले सल्लाह दिए।
तपाईंको परीक्षण पूरा भइसकेपछि प्रयोग गरिएको सबै किटलाई राम्ररी झोलामा राखेर सुरक्षितसाथ फाल्नुहोस्।
यसरी तपाईंले पनि घरमै बसेर आफैं कोभिड परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। बजारमा एन्टिजेन किटको मूल्य ७५० रूपैयाँ तोकिएको छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १७, २०७८, ०५:१७:००